हामीलाई हराउनसक्ने मत उहाँहरुसँग छ « Jana Aastha News Online
| Mon Jun 27 2022
हामीलाई हराउनसक्ने मत उहाँहरुसँग छ
प्रकाशित मिति : ७ जेष्ठ २०७९, शनिबार २१:३०
– रमेश महर्जन, निवर्तमान मेयर
वामपन्थीको लालकिल्लाका रूपमा हेरिएको कीर्तिपुर नगरपालिकामा पहिलो पटक एमाले ‘क्लिन स्विप’ भएको छ । एमालेको गढ भत्काउँदै कांग्रेसले मेयर र जसपाले उपमेयर जितेको छ । ०५४ सालदेखि नगरपालिका बनेको कीर्तिपुरमा पहिलो पटक कांग्रेसका उम्मेदवार विजयी भएका हुन् । अघिल्लो पटक मेयर, उपमेयरसहित ७ वटा वडामा जित हासिल गरेको एमालेले यसपटक मेयरका रूपमा केशरत्न बज्राचार्यलाई मैदानमा उतारेको थियो । हिजो एमालेलाई हराउन सक्रिय रहेका र पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीका पिए राजेशको नातेदारसमेत रहेका उनलाई बालकोटको ठाडो दबाबमा टिकट दिइएसँगै कीर्तिपुर नगरपालिका गुमाउनुपरेको कतिपय नेताहरू बताउँछन् । मेयरमा दोहो¥याएर आकांक्षी थिए रमेश महर्जन, ०३६ सालदेखि राजनीतिमा होमिएका । वामपन्थी आन्दोलनको केन्द्र थियो परोपकार स्कुल, त्यहीं अध्ययनरत रहँदैदेखि आन्दोलनमा होमिएर ०४० सालमा शंकरदेव क्याम्पस विशेष प्रारम्भिक कमिटीमा अनेरास्ववियुको सहसचिव हुँदै राजनीतिक यात्रा अघि बढाएका । अघिल्लो पटक लोकप्रिय काम गरेका महर्जन र उपमेयर सरस्वती खड्का दुबैले टिकट पाएनन् । नेतृत्वले ‘लौरो’लाई उठाए पनि जितिन्छ भनेर खेलाँची सोच्दा एमालेले लालकिल्ला गुमाएको छ । रमेशहरूले टिकट नपाउनुको खास कारणचाहिँ पार्र्टी विभाजनपछि वामदेव गौतमको एकता अभियानमा लाग्नुलाई मानिएको छ तर रमेश यो कुरा स्वीकार्न तयार छैनन् ।
कुनै समयको लालकिल्ला मानिएको कीर्तिपुर नगरपालिका यसपटक एमालेले गुमाउँदा कस्तो महसुस गरिरहनुभएको छ ?
– स्वाभाविकै हो जस्तो लाग्छ तर सर्वसाधारण मतदाताले स्वीकार्न गाह्रो मानिरहेको अवस्था छ ।
सर्वसाधारणलाई चाहिँ किन गाह्रो ?
– एमाले उम्मेदवारलाई ३५ सय ३६ मतान्तरले पराजित गर्दै कांग्रेसका उम्मेदवार जितेका छन् । हिजो सातवटा वडासहित मेयर र उपमेयर जितेको कीर्तिपुरमा १० मध्ये ९ वडाध्यक्ष कांग्रेसका उम्मेदवार विजयी हुनु स्वाभाविक हुँदै हैन । यस्तो नहुनुपर्ने । कम्तीमा तीनदेखि चारवटा वडा एमालेले जित्छ भन्ने सर्वसाधारणको अनुमान थियो ।
कीर्तिपुर नगरपालिकाबाट यहाँ आफैं मेयरको आकांक्षी हुनुहुन्थ्यो, किन र कसरी खोसियो टिकट ?
– त्यसको मूल्यांकन आगामी दिनमा होला । पार्र्टीले युवालाई उठाउने भन्ने सोचेको होला । पार्र्टीको उम्मेदवारलाई कीर्तिपुरका सर्वसाधारण जनताले अप्रत्यासित मानेका थिए । किन यस्तो भयो भनेर केन्द्रीय तहमा बसेर हामीले कुरा गरेका छैनौं । हामी इमान्दार कार्यकर्ता हौं । पार्र्टीले जे–जसो लगायो, त्यही गर्ने हो । दिएको जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गर्दै आइएको हो तर अहिले जुन परिणाम आयो, यो सुखद रहेन ।
एमालेले बालकोटको ठाडो आदेशमा केशररत्न बज्राचार्यलाई उम्मेदवार त बनायो तर लालकिल्ला जोगाउन सकेन । किन यस्तो परिणाम आयो ? आन्तरिक घातप्रतिघात पनि कारक हो ?
– हामीले कम्तीमा पाँच–सात वडा त जित्छौं होला भन्ने अपेक्षा राखेका थियौं । माओवादीलाई दुई सयदेखि दुई सय पचाससम्म मत सातै छाप गएको देखिएको छ । केही आन्तरिक समस्याका कारण त्यस्तो परिणाम आएको हुन सक्छ ।
५ वर्षअघि नयाँ शक्तिबाट आएका, हिजो एमालेलाई हराउनका लागि वडाध्यक्ष उठेका, यस्तै प्रदेश सभामा उठेर एमालेलाई हराउन लागिपरेका, विवादास्पद छविका अयोग्य व्यक्तिलाई टिकट दिनुपर्ने बाध्यता के रहेछ नेतृत्वलाई ?
– यो विषय मलाई भन्दा पनि सम्बन्धित ठाउँमा सोध्दा राम्रो होला ।
तर, एमालेलाई घाटा लाग्यो नि !
– परिणामले त त्यही देखाउँछ तर त्यही मात्र प्रधान कारण नहोला ।
तपाईंहरूले एक कार्यकाल हाँकिसकेको पालिका हो कीर्तिपुर तपाईंहरूले काम गर्न नसकेर अहिले यस्तो परिणाम आएको त हैन ?
– हामीले सबैलाई खुशी पार्न सकेनौं होला तर अन्य पालिकाको तुलनामा हाम्रो काम गराइबाट यहाँका जनता खुशी नै छन् भन्ने लाग्छ ।
गठबन्धन मात्र हारको कारण हो वा टिकट वितरणमा नेतृत्वको स्वेच्छाचारिता पनि ?
– जनतालाई चित्त नबुझेको एउटा कारण त्यो पनि हो । जनताले एक जना उम्मेदवारको अपेक्षा गरेको हुन्छ । उम्मेदवार अर्कै हुँदा गुनासो रहन सक्छ ।
लठ्ठी उठाए पनि जितिन्छ भन्ने नेतृत्वको खेलाँचीको शिकार भएको हो उसो भए ?
– जसले पठाइदिनुभयो । उहाँलाई नै सोध्दा होला । पार्र्टीले जसलाई उठाए पनि हामीले बोक्नेसम्म न हो !
काठमाडौं उपत्यकामा जम्मा ५२ प्रतिशत मात्र मत खसेको देखियो । ०७४ सालमा जत्तिको मत पनि खसेन । जनतामा मतदानप्रति किन अनिच्छा भएको होला ?
– कीर्तिपुरमा अघिल्लो पटक र अहिले पनि ८० प्रतिशतकै हाराहारीमा मत खसेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको कुरा गर्ने हो यहाँ १५ देखि २० प्रतिशत माइग्रेटेड जनसंख्या छ । मलाई लाग्छ, उहाँहरूको दुबैतिर मतदाता नामावली छ ।
०७४ सालमा तीन चरणमा निर्वाचन भएको थियो । पहिलो चरण काठमाडौंलगायत स्थानमा, दोस्रो चरण सुदूरपश्चिमका स्थानीय तह र तेश्रो मधेश प्रदेशमा तर अहिले एकै चरणमा निर्वाचन भयो । प्रायःजसो गाउँतिर लाग्नुभयो भन्ने मेरो अनुमान छ । त्यही कारण काठमाडौंमा खस्नुपर्ने जति मत हुनुपर्छ ।
कम मत खस्नुमा दलीय विभाजन र गुटको असर पो हो कि ?
– दलीय विभाजनले त झन् धेरै मत खस्नुपर्ने हो । विभाजित भएर जानुभएकाहरूको मुख्य उद्देश्य एमालेलाई हराउने भएकोले झन् धेरै मत खस्नुपर्ने हो ।
काठमाडौंका दशवटा पालिकामध्ये ४ स्थान छाडेर अरुमा एमालेले उम्मेदवार दोहो¥याएको देखियो । तपाईहरूलाई मात्रै किन छुटाइएको होला ?
– जुन तहले उम्मेदवार बनाएन, त्यही तहमा सोधपुछ गर्दा राम्रो होला । हामीले टिकट किन पाएनौं भनेर माथिल्लो निकायसँग कुराकानी भएको छैन । चाहे कीर्तिपुर होस् वा काठमाडौं महानगरपालिकाकै हकमा होस् । परिणाम त सुखद देखिरहेको छैन । पार्र्टी यो स्थितिमा पुग्नुको विभिन्न कारणहरूको समीक्षा भोलि पार्र्टी, नगर, जिल्ला र केन्द्रीय कमिटीले गर्लान् ।
हिजो नेकपा विभाजनपछि केही समय प्रचण्ड, माधव नेपाल समूह हुँदै केही समय वामदेवको एकता अभियानमा पनि लाग्नुभयो । तपाईंहरूले टिकट नपाउनुको कारण यही त हैन ?
– माधव नेपालपट्टि त म लागेको होइन । पार्र्टी दुई वटा फ्याक्टमा गएपछि त्यतातिर लाग्नु हुँदैन भनेर दुई–तीन महिना वामदेव गौतमको अभियानमा लागेका हौं । त्यसपछि पुरानै घरमा फर्कियौं । त्यतिखेर कीर्तिपुर नगरपालिकाका एक जनाबाहेक सबै जनप्रतिनिधि संस्थापन पक्षतिर फर्किएका हौं ।
अहिलेका नवनिर्वाचित उम्मेदवारबाट के अपेक्षा राख्नुहुन्छ ?
– विकास निर्माण निरन्तर चल्ने प्रक्रिया हो । सम्पदाको क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गरेका छौं, शिक्षाका क्षेत्रमा स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरेका छौं । स्थानीय भाषामै विभिन्न विद्यालयका पाठ्यक्रम बनाएर लागू गरेका छौं । व्यवस्थित बसोबासका लागि जग्गा एकीकरणको काम शुरु गर्न सकेनौं डिपिआरका कारण । खानेपानीको सवालमा मेलम्ची आइसकेपछि अहिले खासै समस्या छैन ।
ढल निकास सबै बन्ने क्रममा छ । वर्षा रोकिएपछि सबै सडक पिच हुनेछ । सुख्खा बन्दरगाह फुल फेजमा चल्ने, दोश्रो चक्रपथ कीर्तिपुर सुरु गर्ने भन्ने थियो त्यो गर्न सकेनौं । जग्गाधनीको झगडाका कारण ६० जनाले लालपुर्जा पाउनुभएको छैन । त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुहोला भन्ने लाग्छ । यस अलावा समस्त कीर्तिपुरको उत्थानमा लाग्न सक्नुहोस् भन्ने शुभकामना छ ।
विगतमा एउटै पार्र्टीबाट मेयर र उपमेयर भएका पालिकामा झनै बढी खटपट देखिन्थ्यो । कीर्तिपुरमा तादात्म्यता कसरी मिलेको थियो ?
– हामी टिम वर्कमा विश्वास गथ्र्याैं । कुनै काम गर्नुपूर्व उपमेयर, वडाध्यक्षसँग औपचारिक र अनौपचारिक सरसल्लाह हुन्थ्यो । टिमवर्कमा काम गरेका कारण कहीँ–कतै त्यस्तो टसल देखा पर्न दिएनौं । कतिपय स्थानमा आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर जाँदा विवाद निस्कने हो, हाम्रोमा त्यस्तो रहेन ।
एमालेले अहिलेसम्म प्राप्त गरेको मत परिणामलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ ?
– पार्र्टीभित्र विभाजन आएको छ । नेकपा एसको नाममा विभाजनमा जानुभएका साथीहरूको नीति जसरी पनि एमालेलाई हराउनुपर्छ भन्ने छ । त्यसले पनि ठूलो असर गरेको छ । अर्काेतिर गठबन्धन थुप्रै ठाउँमा भएका छन् । हामीकहाँ तीन वटा ठूला दल छन् । दोश्रो र तेश्रो दल मिलेपछि हामीलाई हराउन सक्ने मत उहाँहरूसँग छ । त्यही कारण पहिले जितेका थुप्रै ठाउँमा हामी दोश्रो स्थानमा छौं ।
कीर्तिपुरकै हकमा पनि हामी पहिलो बनेका थियौं विगतमा । अहिले दोश्रो र तेश्रो दल मिलेर हराउने आधार बनेको छ । कुनै १२, कुनै ०३६ मतले जितेको स्थानमा अहिले उहाँहरूको अघोषित गठबन्धन भएपछि हार्नु स्वाभाविक हो । अहिले जुन खालको मत परिणाम एमालेले पाएको छ त्यसको गम्भीर सिंहावलोकन गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । कमजोरी जानेर वा नजानेर जसरी भएको भए पनि आत्मसमीक्षा गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।
काठमाडौंका माननीय रामवीर मानन्धर पनि मेयरका आकांक्षी हुनुहुन्थ्यो । उहाँले टिकट नपाएकै कारण केशव स्थापितलाई हराउन लाग्नुभयो भन्ने चर्चा पनि छ । वास्तविकता के हो ?
– चुनावको समयमा हामी कीर्तिपुरमा व्यस्त रह्यौं । त्यताको थाहा भएन ।
अब एमाले कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ ?
– अबको पाँच ६ महिनामै प्रदेश र संघको चुनाव आउँदै छ । यहीअनुसार जनताको असन्तुष्टि, कार्यकर्ता पंक्तिको असन्तुष्टिलाई पालिकादेखि केन्द्रीय कमिटीसम्मले गम्भीरतापूर्वक लिएर अहिले भएका कमजोरी सुधार्नु जरुरी छ ।
कस्तो सपना देख्न पुगेछु कमरेड !
मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदलयात्रीको ज्यान गयो
मुख सिलाएको बोरामा पुरुषको शव
मतदाता थपिन अब चाहिँ मुश्किल
नेताहरुलाई कार्यालयभन्दा निवास नै प्यारो,ओलीकै पालाको जस्तो अप्ठ्यारो
सभामुख सापकोटा केहीबेरमा सिभिल अस्पताल जाँदै
११ बजे शीतल निवासमा विशेष समारोह
सहकारी, किन गर्छौ मनपरी ?
सशस्त्रका तालिमेसँग १० हजार उठाइयो
राष्ट्र बैंकका सुरक्षा कमाण्डर दुर्घटनामा दिवङ्गत
प्रधानमन्त्रीकी पत्नीले साह्रै पेलेपछि…..